Asa sarotra sy mandalo sedra maro: mitantara ny fiatrehany ny maririn’ny Covid-19 i Toavina | NewsMada
Asa sarotra sy mandalo sedra maro: mitantara ny fiatrehany ny maririn’ny Covid-19 i Toavina
Mitantara ny fomba iatrehany ny asa fandraisana ireo mararin’ny covid19 ao amin’ny hopitaly iasany i Ranaivoson Toavina. Vonjy aina sy fanavotana ny marary no hatao ary manao sorona ny aina amin’ny fanatanterahana izany. Resadresaka.
Fiainana ao amin’ny hopitaly: miasa ao amin’ny hopitaly ao Antsirabe aho. Telo taona sy tapany aho izay ny niasa eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Teknisianina amin’ny laboratoara ny iandraiketako. Roa taona izao ny niasana eto Antsirabe. Tsy misy havana, tsy misy olom-pantatra fa asa ka tsy maintsy mandeha. Hatramin’izay ni­sian’ ny Covid-19 eto Mada­gasikara, tsy nitsahatra ny nitombo ny asa. Hazakazaka sy rotoroto hatrany ny iainana isan’andro satria tsy maintsy vonjena ny marary. Miasa 24 ora amin’ny 24 ora ary misy fakàna aina ihany anefa eo anelanelan’izay. Mahaontsa ny mahita ireo olona tonga manao fitiliana eto satria raha vao misy tranga kely fotsiny, efa tahotra no tonga voalohany ao an-tsaina. Manampy trotraka ihany koa ny antontanisan’ireo olona maty na marary mafin’ny Covid-19 izay miseho etsy sy eroa. Tena maro anisa ireo tanora tonga mamonjy ety amin’ny hopitaly. Raha vao misy mpianatra iray ahitana tranga hafahafa, tonga mamonjy eto avokoa ny mpianatra rehetra, na ihany koa hoe misy mpiasa amina orinasa iray tratran’ny Covid, tonga manao fitiliana eto avokoa ny mpiara-miasa rehetra.
Mila maka aina ihany: Ankoatra ny asa, mialavoly ihany aho. Makamaka rivotra sy mandehaleha miaraka amin’ny ankizy manala sorosory kely rehefa tsy miasa satria tena mahasempotra ilay rotoroto andavanandro. Matetika rehefa fety, mody any an-dRenivohitra mamonjy fianakaviana. Manana ny fiarovantenany manokana izahay mpiasan’ny fahasalamana. Tsy maintsy manao EPI rehefa mandray marary ary tsy hadino ny “gel” sy ny arovava. Anisan’ny tena atahorako mafy ny fivoaran’ity aretina ity ny fisian’ilay “variant”. Tsy atao ambanin-javatra ny sakafo ara-pahasalamana sy ara-potoana ary manaraka ny toetrandro. Tsy hadino ny mivavaka.
Hafatra: Hajao mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana rehetra raha vao misy tranga hafahafa ka manatona toeram-pitsaboana fa tena efa miparitaka be ilay aretina ary tsy misangy. Tsy mitovy amin’ilay tamin’ny herintaona intsony fa efa nisy fivoarana be ary mamono anatin’ny ora vitsy. Efa miezaka izahay mpiasan’ny fahasalamana manao sorona ny tenanay ho anareo fa ianareo ihany koa mba mila manaraka fepetra eo anatrehan’izay. Aza hadino mandrakariva ny mivavaka, tsy mitsahatra ny mivavaka ho an’ireo marary aho, na ireo mbola salama. Mety efa mitondra ny tsimokaretina isika, saingy salama fa tsy misy mahalala ee!! Fa mila mitandrina mandrakariva.